दि प्लेटफर्म : वर्तमान समयको कथा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा रिलिज भए पनि गत हप्ता ‘नेटफ्लिक्स’ मार्फत इन्टरनेटमा विश्वव्यापी रिलिज भएपछि स्पेनी सिनेमा ‘दि प्लेटफर्म’ ले धेरैको ध्यान तानेको छ।
‘दि प्लेटफर्म’ नेटफ्लिक्समा यस्तो बेला रिलिज भएको छ, जति बेला विश्व कोरोना भाइरससँग जुझिरहेको छ । ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ ले यसलाई ‘दुर्घटनावश मिलेको संयोग’ भनेको छ। महामारीसँग जुध्न नेपाललगायत विश्वका सबैजसो देशले लकडाउन गरेका छन्। पसल, कार्यालय, यातायात सबै बन्द गरेर मानिसहरूलाई एक अर्कासँग दुरी कायम राख्न घरभित्रै बस्न भनिएको छ। कुनै औषधी पत्ता नलागेको यो रोगसँग लड्न लकडाउनलाई नै सर्वोत्तम उपाय मानिएको छ। यसरी मानिसले रोगसँग त ढिलो चाँडो विजय प्राप्त गर्ला तर यसले विश्वभरि नै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको जीवन कष्टकर बनाउँदै गएका खबरहरू आइरहेका छन् ।
‘दि प्लेटफर्म’ को कथा सयौँ तला अग्लो एउटा जेलको कथा हो। हरेक तलामा एउटा मात्र सानो कोठा छ, जहाँ दुई जना कैदीलाई राखिएको छ । बिचमा एउटा ठुलो खाली ठाउँ छ, त्यहीँबाट कैदीहरू आफूभन्दा माथि र तल्लो तलाका मान्छेलाई देख्न र बोल्न सक्छन् तर उनीहरुबीच संवाद विरलै हुने गर्दछ। प्रत्येक दिन केही समयको लागि त्यो खाली ठाउँमा खाना भरिएको एउटा ठुलो तख्ता आउँछ जसलाई ‘प्लेटफर्म’ भनिन्छ। सबैभन्दा माथिल्लो तलाबाट प्रत्येक तलामा केही मिनेटको लागि रोकिदैं ‘प्लेटफर्म’ तल झर्छ। निश्चित समयभित्र माथिल्लो तलाका मान्छेले खान सक्ने जति खान्छन् अनि बचेको खाना क्रमशः तल झर्दै जान्छ। न कसैले खाना चोर्न सक्छ न लुकाउन नै। प्लेटफर्म जति तल जान्छ, खाना सकिँदै जान्छ। अनि सुरु हुन्छ खानाको लागी युद्ध।
तल्लो तलामा हुने कैदीहरू खान नपाएर एक अर्काको मासु सम्म खान्छन्। नियम अनुसार कैदीहरू प्रत्येक तलामा एक महिनासम्म रहनुपर्ने हुन्छ। महिना दिन पछि कि अझै तल झर्न सक्छन् वा माथि जान सक्छन्। एक महिनामा तल्लो तलामा रहेको कैदी माथीकाले केही खाना छोड्लान् भन्ने आशामा हुन्छ तर ऊ आफै माथिल्लो तलामा पुग्दा भने अरूको लागी नसोची चाहिने भन्दा बढी खान उद्धत हुने गर्छ। एउटा डिग्री पाउने सर्तमा ६ महिनाको लागि जेलमा स्वेच्छाले आएको नव-युवक ‘गोरेङ’ ले त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्छ। भनिन्छ, ‘यदि सबै तलाका कैदीहरूले आफूलाई चाहिने जति मात्र खाने हो भने ‘प्लेटफर्म’ मा सबैभन्दा तल्लो तलासम्मको कैदीलाई पुग्ने खाना हुन्छ।’ यो कुरा बुझेको गोरङले अरू कैदीलाई बुझाउन प्रयास गर्छ। तर ऊ भन्दा तलकाले माने पनि उ भन्दा माथिकोले आफूलाई चाहिए जति मात्र खाने कुरा स्विकार्दैनन्। अर्को महिना १७२औँ तलामा झरेपछि १७१ औँ तलाका कैदीहरूले चाहिने भन्दा बढी खाएकोले उनीहरूसम्म पुग्दा ‘प्लेटफर्म’मा खाली भाँडा मात्र हुन्छन् अनि गोरेङलाई पहिले मित्रवत् व्यवहार गरेको उसको रुम मेट ‘ट्रामागासी’ले मारेर खान खोज्छ तर आफ्नी छोरी खोज्दै हिँडेकी ‘मिहारु’ ले माथिल्लो तलाबाट आएर ‘ट्रामागासी’ लाई मारिदिन्छे र उसको मासु खाएर ऊ र गोरेङ बाँच्न सफल हुन्छन्।
अर्को महिना छैटौँ तलामा पुगेको ‘गोरेङ’ ले त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी नखाने मात्रै होइन की नयाँ रुम मेट ‘बहारत’ सँग मिलेर प्लेटफर्ममा चढेर तल्लो तलासम्म पुग्ने र मान्छेहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्रै खान दिई सबैलाई समान रूपमा खाना वितरण गर्ने सल्लाह गर्छ ।
नेपाल पनि विगत ५५ दिन देखि बन्द छ। यो पढिरहँदा आफैलाई एउटा प्रश्न गर्नुहोस् त, देश ‘लकडाउन’ हुने भन्ने भएपछि कतिले आफूले प्रयोग गर्नेभन्दा बढी ग्याँस सिलिन्डर लिएर आयौँ? कतिले चामल, नुन तेल र अन्य खाद्यान्न सामग्री आफ्नो परिवारलाई चाहिनेभन्दा बढी थुपार्‍यौ? आफूभन्दा पछि आउने व्यक्तिको आवश्यकता नहेरी स्यानिटाइजर र मास्क पाए जति किनेर कतिले लग्यौँ? बजारमा माथि उल्लेखित सबै नभए पनि धेरै जसो सामानको अभाव हुन थालेबाट थाहा हुन्छ की हामीमध्ये धेरैले आफ्नो आवश्यकता हेरेर हैन, साधन र स्रोतमा आफ्नो पहुँच अनुसार यी सामानहरू सकेसम्म बढी किनेर थुपार्यौं।
यो हाम्रो मात्र होइन, समग्र विश्वकै समस्या हो। महामारीको संकटबीच पश्चिमा मुलुकहरूमा ट्वाइलेट पेपरको अभाव यसै भएको हैन। अहिले केही प्रस्ट रूपमा देखिएको जस्तो लागे पनि यो समस्या वर्गीय हो र यो धेरै पहिले देखि हामी बिच रही आएको थियो। के हामी यो अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्छौँ? के हामीसँग भएका सीमित स्रोत साधन र हाम्रो असीमित चाहनाहरू बिच सामञ्जस्ययता कायम गर्दै समाजका तल्लो तहमा रहेको वर्ग सम्म तिनको पहुँच स्थापित गर्न सक्छौ? समस्याको यो दलदलबाट निस्कने उपाय हिंसात्मक हुन जरुरी छ । वा परिवर्तन आफसे आफ हुन्छ? ‘द प्लेटफर्म’ ले जेलमा रहेका कैदी र तिनलाई ‘प्लेटफर्म’ मा राखेर दिइने खानाको बिम्ब प्रयोग गरी यीनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ।
लेखक: खनिया सामाजिक अभियान्ता तथा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता हुन